Sida loo badbaadiyo YouTube audio la Loss Tayada Zero
> Resource > Video > Sida loo YouTube ka badbaadi Audio Si fudud
Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa ilo audio cajiib ah on YouTube, sida videos music ama music asalka ka videos user-dhalinta. Maxaa dhacaya haddii aad u baahan tahay oo kaliya qayb ka mid ah audio ee YouTube videos? Sidaas, waxaad u isticmaali kartaa in aad video oo macmal ah ama maqlaan inay ku dhaqaaqo. Weli xoqidda madaxa si aad u hesho qalab fiican si ay uga caawiyaan audio ka YouTube mooyaane? Ha welwelin. Waxaad ka heli kartaa mid ka mid here- Streaming taariikhqorihii Audio . Waxaa aad u saamaxaaya in ay badbaadin YouTube audio tayo waayi maayo iyo xitaa badbaadin karo playlists YouTube si fudud. Bal aan waqti lahayn in ay arkaan Hanuuniye faahfaahsan hoos ku qoran.
Download version a saxda ah ee barnaamijka oo ku xidh on your computer. Labada qeybood oo shaqeyn dhow si la mid ah. Sidaas awgeed, waxaan diiradda saari doonaa oo kaliya on version daaqadaha.
2 Save audio ka YouTube video
Orod barnaamijka si aad u hesho button Record ah ee geeska bidixda ah ee kore. Riix badhanka markaas maraan si aad u hesho a YouTube music video ama kale videos la audio aad jeceshahay in uu ciyaaro. Sida ugu dhakhsaha badan video ka ciyaara, barnaamijka bilaabi doonaa badbaadinta audio ka YouTube online waqti isku mid ah.
Xasuusnow inaad haysatid internet-ka u socdaan si wanaagsan iyo ciyaaro video ah isku mar. Waxaad ka ciyaari kara playlist YouTube ah oo isku xigta iyo barnaamijka ay ku badbaadin karto oo dhan audio iyo iyaga si toos ah u kala qaybsan tahay.
Ka dib markii audio la badbaadiyey ka YouTube videos, waxaad ka heli kartaa tab Library. Dabcan, waxaad ka ciyaari kartaa barnaamijka, laakiin ugu idinka mid ah waxaa laga yaabaa in ay qaataan audio in ay tagaan. Sidaas waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad geliyey qalabka sida iPod ama kuwa kale aad.
Muujinta audio ah (hal ama dhowr) oo guji badhanka dar Lugood in. Suuqa kala pop-up A tusi doono, aad ogaanaya in audio ee lagu dari doonaa Lugood iyo aad ka heli kartaa playlist SAR ah. Riix dar, heli audio on Lugood dibna u hagaagsan qalabka Apple aad sida iPod.
Wixii qalab kale, ma aha in aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan si Lugood hore. Just xaq-riix audio iyo dooro Open ee Folder si aad u ogaato meesha audio la badbaadiyey. Markaas nuqul ama jiidi audio in ay qalabka gacanta.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad sameyso ringtones out of audio badbaadiyey. Riix icon dawan iyo bitmap a tusi doonaa. Jar qayb kasta oo aad jeceshahay iyo in lagu shubaa telefoonada badbaadin. Waxa kale oo aad edit karaa macluumaadka ku saabsan audio ka. Xaq-riix audio iyo dooro View Detail in ay bedesho xogta iyadoo column pop-up ee xaq ah.